နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ် Co (24 များအတွက်စုစုပေါင်း လူမီနီယမ် Co ထုတ်ကုန်များ)
လူမီနီယမ် Co - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ လူမီနီယမ် Co ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား လူမီနီယမ် Co / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် လူမီနီယမ် Co များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: မော်တော်ကားသတ္တုပုံပန်းသဏ္ဍာန်အစိတ်အပိုင်းများ , သတ္တုပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆက်စပ်ပစ္စည်း , မော်တော်ယာဉ်ဗဟို Console
သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နည်းပညာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ပေါ့ပါး၏လမ်းကြောင်းသစ်၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပို. ပို. ferrous သတ္တု Cast နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေ Cast အစားထိုးနေကြပါတယ်။ သေဆုံး-casting...
tag ကို: လူမီနီယမ် Casted အစိတ်အပိုင်းများ Die , လူမီနီယမ် Die Castor , လူမီနီယမ်ဖိအားကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die
လူမီနီယမ်ဖိအားကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အရည်အသွေးအခြေခံပစ္စည်းများနှင့်ခေတ်ပြိုင်နည်းပညာအသုံးချဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။...
tag ကို: တိကျသေကာစ် , တိကျသောသေကာစ် , semi-အစိုင်အခဲကာစ်တင်စက်များ
တိကျသေချမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းကောင်းမွန်သောလက်ကိုင်အတူကခိုင်မာတဲ့နှင့်တာရှည်ခံအောင်, အသေသတ္တုများပုံသွန်းဂိမ်း Controller ကိုအရိုးစုစေရန်အသုံးပြုသည်။ တူညီတဲ့အစွမ်းသတ္တိအစိတျအပိုငျးနှင့်အတူ,...
tag ကို: PC ကွန်ပျူတာမောက်အိမ်ရာ , သို့ကာစ်သံမဏိ Die , Diecast ထုတ်ကုန်များအပိုင်း
ကျယ်ပြန့်အိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ, အိုးအိမ်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုကို ABS ပလပ်စတစ်။ Ketone, benzene နှင့်ကို ABS ပလပ်စတစ်၏အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖျက်သိမ်းကို ABS ပလပ်စတစ်,...
tag ကို: လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting , အမြဲတမ်းမှိုကာစ် , Precision Diecast မော်ဒယ်ကားများသတ်မှတ်မည်
လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting အလေးချိန်ရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်မော်တော်ယာဉ်လောင်စာထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ လူမီနီယံအလွိုင်းသေ-casting အစိတ်အပိုင်းများသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ ထိုကဲ့သို့သောပါဝါ tools...
tag ကို: အမြဲတမ်းမှိုသတ္တုကာစ် , အမြဲတမ်းမှိုကာစ် Method ကို , အမြဲတမ်းမှိုကာစ်တင်စက်
ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးအမြဲတမ်းမှိုကာစ် Method ကိုများစွာသောအမျိုးမျိုးမှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, (အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့သတ္တုစပ်) သတ္တုလမ်းပိတ်ထားသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမော်တော်ယာဉ်များ,...
tag ကို: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Casting Die , သဲကာစ်မှို , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Casting
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 100 နီးပါးအနှစ်နှင့်တကွ, မဂ္ဂနီဆီယမ် Die Casting စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များလာမည့်အနည်းငယ်အတွက် 10 နှစ်အချိန်ယူပေါ့ပါးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစနစ်များကို (အကျော်ကြားဆုံးမော်တော်ကားစနစ်များ)...
tag ကို: မှို Casting Die , မှိုဒီဇိုင်း Casting Die , ပစ္စည်းကိရိယာ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်မှို Casting, ခိုင်မာတဲ့တင်းကျပ်, အပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး, သငျသညျကြာရှည်ခံမှုယဇျပူဇျောချင် don`t လာသောအခါအလေးချိန်ချွေတာများအတွက်စံပြအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ် Die ။ အဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်များ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အာကာသ,...
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ်သတ္တုစပ် , မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ်လုပ်ငန်းစဉ် , semi Solid ကာစ် Method ကို
တိုးမြှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစွမ်းအင်ဝယ်လိုအား, ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများပေါ့ပါးပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ်သတ္တုစပ်များကိုပိုမို applications များလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ် လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း။...
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် , CNC မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းကာစ် Die
မြင့်မားသောဖိအားသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းများအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်း Casting Die ဖြစ်ပြီး, အတော်ကြာဖြစ်စဉ်ကိုမျိုးကွဲတိုးတက်လာသောသတ္တုများပုံသွန်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်တီထွင်လျက်ရှိသည်။ သံမဏိတစတုတ္ထနှင့်လူမီနီယံ၏သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်...
tag ကို: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Properties ကို , သို့ကာစ်မှို Die , နယူးနည်းပညာ Casting Die
အားလုံးထုတ်ကုန် input ကို၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိအတူထုတ်လုပ်သောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုကျွမ်းကျင်သူများ၏တင်းကျပ်သောကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်နယူးနည်းပညာ Casting Die နေကြသည်။...
tag ကို: လူမီနီယမ် Die ကာစ်လုပ်ငန်းစဉ် , လူမီနီယမ်ဖိအားသေကာစ် , လူမီနီယမ် Die ကာစ်တင်ထုတ်ကုန်များ
လူမီနီယမ် Die ကာစ်တင်ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်, မော်တော်ကား, မော်တာ, အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်အချို့သောဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတိကျစွာနှင့်မြင့်မားခိုင်မာခြင်းနှင့်အတူအခြို့သောက...
tag ကို: အမြဲတမ်းမှိုကာစ်အစိတ်အပိုင်းများ , အမြဲတမ်းမှိုကာစ်လုပ်ငန်းစဉ် , စက်သို့ကာစ် Die
tag ကို: တိကျမှို Tool ကိုအုပ်စု , တိကျပုံသွင်းထားထုတ်ကုန်များ , Precision Tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများ
ကျနော်တို့ Precision ပုံသွင်းထားထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အထူးပြု။ ထိုထုတ်ကုန်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒိုမိန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများနေသောကျွမ်းကျင် & စိတ်ရင်းပညာရှင်များ၏အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်...
tag ကို: နှစ်ချက်အရောင်မှို , ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုဒီဇိုင်း , နှစ်ချက်အရောင်မှို Tool ကို
tag ကို: injection Tool ကိုလုပ်ငန်းစဉ် , injection မှိုကုန်ကျစရိတ် , injection မှိုပစ္စည်းများ
tag ကို: လူမီနီယမ် Die ကာစ် , မှို Casting Die , Process ကို Casting Die
လူမီနီယမ် ချ. အစိတ်အပိုင်းများသေဆုံးလည်းသူတို့ရဲ့ချေးခုခံသူတို့ကိုအဓိကရွေးချယ်မှုအောင်ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများဘို့ရွေးကောက်နေကြတယ် အဏ္ဏဝါ applications များမှစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အိမ်ရာကနေပလီကေးရှင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်သည်။...
tag ကို: injection မှိုအခြေစိုက်စခန်း , ပလပ်စတစ်မှို Injector စက် , အကြီးစားပလတ်စတစ်မှို
ပလပ်စတစ်မှို Injector စက်ဒီဇိုင်းထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဒုတိယအခြေခံခြေလှမ်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုလေ့သတ္တုဤအမြိုးအစားထဲကနေထားကြပါတယ်: သြော်သံမဏိ, Prehardened သံမဏိ, လူမီနီယမ်, Beryllium-ကြေးနီအလွိုင်း။...
tag ကို: injection မှို Applications ကို , ပလပ်စတစ် Injection ကို Molders , အော်တိုတံခါးမှို
လျှောက်လွှာများ NC စက်အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် injection မှို, အ CNC ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက်စင်တာအတွက်ဆေးထိုးတန်ဆာ applications များ, CNC ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းစက်နှင့် CNC EDM...
tag ကို: ဖိအားသေကာစ် , ဆွဲငင်အားသေကာစ် , Casting Process ကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်း
အဆိုပါသတ္တုများပုံသွန်းဖြစ်စဉ်ကိုလူမီနီယံအလွိုင်းအဆိုပါသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နေဆဲအရှိဆုံးချွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းများအတွက်။...
မော်တော်ကားသတ္တုဗဟို Console အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သေကာစ်စက်ရုံနှင့်အတူ OEM လူမီနီယမ်ထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းဂိမ်း Controller လေ့လာကြရအောင် Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM ကို ABS ပလတ်စတစ် Coating Process ကို PC ကိုကြွက်အိမ်ရာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖိအားလူမီနီယမ်အလွိုင်းဟော့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူမီနီယမ်အဘို့အ OEM ဝန်ဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာစ် Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Mag အလွိုင်း Die-Casting လျှပ်စစ် Connector ရှဲလ်များအတွက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ် Connector ရှဲလ်များအတွက်စိတ်တိုင်းကျ Precision မဂ္ဂနီစီယမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM အမြင့်အိမ်ခြံမြေလျှပ်စစ် Connectors အိမ်ရာ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components OEM Casting မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကို Semi-Solid သေ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Precision စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ် Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအမြင့် Precision Casting အစိတ်အပိုင်းများ Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြင့်အိမ်ခြံမြေစက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ် Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မှိုဒီဇိုင်းပလတ်စတစ် Tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများစိတ်တိုင်းကျနှစ်ဦး-color မှို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှို Components အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို Components အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၏အိမ်သုံးဘို့ injection မှို Components အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting အမြဲတမ်းမှိုလူမီနီယမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale လူမီနီယမ် Co from China, Need to find cheap လူမီနီယမ် Co as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on လူမီနီယမ် Co produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our လူမီနီယမ် Co , We'll reply you in fastest.